OPride.com|Hambaa Habalee Cittee » QABSOO-DHA MAQAAN ISAA
Home » Featured, Walaloo
Submitted by on July 15, 2011  3:14 amOne Comment
Qabsoo-dha maqaan kansaa
Dachee hunda biyyisaa
Keessumaa qabsoo bilisummaa
Kan caccabsee darbatu
Harqoota kan gabrummaa
Isa guutuu taasisu
Nameenya kan namummaa!
Iddootti kufee olkaasee
Kiyyoo mormarraa baasee
Madaasaa irraa haqee
Raammoo isa madaa keessaa
Nyanyaata akka bineensaa
Nama nama taasisa
Inni nama sanyiin hin qoqqobu
Dabalees amantiin hin qoqqoodu
Aadaan addaan hin baasu
Bifaan gargar hin yaasu
Hunda ija takkaan laala
Cufaaf mirgasaa abbala
Isa abbaan walqixxeessaa
Saboota addunyaa keessaa!
Injiree nurraa micirqisee
Hinjirree nurraa dhidhimsee
Yeeyyilee nurraa bittimsee
Shilmiis saawwanirraa harcaasa
Daanawoos gumbii keessaa baasa
Gabrummaa qabeetoo rarraasa!
Kan Oromoos qabsoo
Kan Kuush kaanis qabsoo
Keessumaa qabsoo sabaa
Oromoo, yaa abbilee
Oromiyaa, yaa harmilee
Erga qorichi qabsoo ta’ee
Erga malli tokkummaa ta’ee
Haa qabsoofnu tokko taanee
Hidhannee manaa baanee!
Hidhannee manaa baanee
Warra Kuushiin waltaanee
Bakka kufnee olkaanee
Imimmaan walirraa haquun
Karchallee wajjin diignee
Roorroo walirraa dhiibnee
Hayyee, qabsoo-dhaan galma keenya geenya
Sansalata malee, guyyum tokkollee teenya!
Yaa Oromoo, aadaan-kee bubburree
Ilaa, biyyi-kees sonaan cocorree
Akka nafxanyoota asittis “iskistaa”
Achittis “iskistaa”, mitii sirboonni-kee
Biddeenuma callaasoo, miti nyaanni-kee
Of-tuullummaa fi sanyummaa miti yaanni-kee!
Atoo qaccee Leenjisaa Diigaa-tii
Atoo diroo Elemoo Qilxuu-tii
Eekaa sanyii Taaddoo Birruu-tii
Maarree lammii Abbishee Garbaa-tii
Kan eessaayyi argattee?
Oromoo uummata kiyya
Uummata-koo uumee tiyya
Yaa safuun guddisa-koo
Abbaa dhugaa lubbuu-too
Jarri maa si dhaana?
Maaf dhaana dirra-kee
Maaf waxala miila-kee?
Ol-ka’i uummata kiyya
Walta’i yaa saba kiyya
Harqoota gabrummaa caccabsi
Sansalata ciccirii darbaddhu
Galma-kee ni geessa abdaddhu!
Ni mootaa, ni mootaa daran abdaddhu
Dhalawwan-kee mara walitti qabaddhu
Sabbata-kee jabeessitii hidhaddhu
Aayyoo ka’ii, siiqqeen joollee-tee labsaddhu
Oromiyaa iyyii, ilmaan Kuush waammaddhu
Mirgaan mancaa qabaddhu
Bitaan wantaa qabaddhu
Oljedhi-kaa waanjoo ofirraa darbaddhu
Biyya biraan qabduu Oromiyaa jaarraddhu!
Barliin, 16. 06. 09
************* Hubachiisa **************
* Walaloon kun gaafa 02. 08. 09 Kora Waldaa Qorannoo Oromoo, jechuun kan OSA isa dira Atlaantaa, Biyya Ameerikaa keessatti adeemsifame irratti kan uummataaf dubbifame ture. Silaa barri kun bara qabsoo uummatoota Afrikaa Kaabaa fi Jiddugaleessa Bahaa-tii, kunoo ijoolleen Oromoos, dhaloonni qubee gabroomfattoota Habashaa irratti fincilaa jirtii, mee walaloo kun isaaniif: mararfannoo, rajeeffannoo, jajjabeessii fi bira-dhaabbannoo haa tahu!
One Comment » muhaammada galatoo says:	December 8, 2012 at 9:03 pm	wolaaloon kee bay’ee garaa nama nyaataa akka dubbiseen imimmaamaan ……………..
itti nuu fufii jazaa kee bilisummaa haa ta’uu ……………..